Kukura kwezvirongwa zvekuvimbika kwevatengi | ECommerce nhau
Kukura kwezvirongwa zvekuvimbika kwevatengi
Susana Maria Urbano Mateos | | Kushambadzira kwenhare
Nhengo muzvirongwa zvekuvimbika dzakakura zvikamu gumi neshanu muzana gore rino kusvika pamabhirioni e15, sekureva kwazvichangobva kuburitswa "2017 Colloquy Kuvimbika Census Chirevo".
Kukura kwakaitika muna 2015Apo nhengo dzakakwira kusvika kumamirioni mazana matatu nemazana matatu ezviuru, kwaive kukura kwe3.3 muzana. Kukura kwakadzikira muUnited States nekuti iwo musika uri kukura, akadaro. Melissa freund, munyori wenyaya yakaburitswa.
Kuwanikwa muzvikamu zvekutengesa kuri kukura zvakanyanya, kunyanya nekuda kwemari inokurudzira. Huwandu hwenhengo ikozvino hwave mamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemana zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana mashanu nemakumi masere neshanu muna664.
Chikamu chekutengesa, Ndiine mamirioni 1.6 mitezo muchirongwa chemubairo, ndinotonga munda. Iwo mafambiro nevekugamuchira vaenzi zvikamu zvakateverwa nenhengo dzinosvika mabhiriyoni 1.1 Imwe yezvikamu zvine simba kwazvo ndiyo imwe chikamu chinobuda, chakafukidzwa pamhepo-chete madhiri, varaidzo, madhiri ezuva nezuva, mapoinzi akaunganidzwa, uye madhiri akabatanidzwa nemakadhi. Iine mamirioni mazana mana nemakumi mana nenomwe, ino chikamu inoverenga gumi nemaviri muzana yenhengo dzese mumusika, maererano neshumo
Kushushikana ndechimwe chezvinhu zvikuru mumapoka ese anomiririrwa nekuverenga, nevatengi vakavimbika kazhinji vachisarudza "Ndinoda zita / mutengesi / sevhisi" sechikonzero chako chikuru chekutora chikamu.
Zvimwe zvakawanikwa zvaive:
53 muzana yevatengi yakaratidza kusununguka kwekushandisa sechikonzero chavo chikuru chekutora chikamu muchirongwa ichi.
39 muzana vakataura zvikwereti zvakakura sechikonzero chavo.
37 muzana vakataura kuti chirongwa ichi chaive nyore kunzwisisa.
57 muzana vakati vakasiya chirongwa nekuti chakatora nguva yakareba kuti vawane mapoinzi.
51 muzana vakati vanovimba chirongwa ichi neruzivo rwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Kukura kwezvirongwa zvekuvimbika kwevatengi
Ungasarudza sei iyo tema yakakwana yeako Shopify chitoro?
Zvekutengesa, foni iri nani pane email